မုဒြာရဲ့ခေါ်သံမှာပါဝင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး လှယဉ်ကျေးရဲ့အနုပညာအကြောင်း
လှယဉ်ကျေး ပြောပြတဲ့ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံနဲ့သူမရဲ့အနုပညာအကြောင်း
10 Mar 2018 . 11:02 AM
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လှယဉ်ကျေးရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပုံတွေ အပြင် မုဒြာခေါ်သံ ဇာတ်လမ်းမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာတွေ ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာလောက ကို စဝင်တာကတော့
၂၀၀၃ခုနှစ်မှာမော်ဒယ်စလုပ်တော့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ၁၀ တန်းဖြေပြီးပြီးချင်းမှာ မော်ဒယ် သင်တန်းကို စတတ်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၀၉ အထိ မတင်မိုးလွင်ရဲ့ မော်ဒယ်အေဂျင်စီ နဲ့ အတူတူတွဲပြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့မှာ ခဏနားပြီးတော့ ဒူဘိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ။် ၂၀၁၁ လောက်မှာ Laurel Art ကျောင်းမှာ ပြန်တတ်ရင်းနဲ့ အနုပညာလောကထဲပြန်ဝင်ပြီး အခုထိလုပ်ဖြစ်နေတာပါ။ ၂၀၁၄ နှစ်စမှာ မုဒြာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလမှာ တော့ မလှနုထွန်းတို့နဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးတော့ Miss Heritage International 2014 ကို နီပေါမှာ ကျင်းပတဲ့ အခါပြိုင်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ Winner ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မောင့်အိမ်သူ မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ လှယဉ်ကျေး
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုတော့ Laurel ကထုတ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ကတော့ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံကို ရိုက်ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ မောင့်အိမ်သူ အခု ဘာတဲ့လဲဟေ့ လာ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Laurel ကပဲထုတ်တဲ့ ကားမှာပဲ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံထဲကနှင်းသူဇာကတော့ အနုပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းအမျိုးသမီး တစ်ယောက် ၊ ခရီးသွားကုမ္ပဏီထောင်ထားတယ် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ် ၊ လူမျိုးကိုချစ်တယ် ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဇာတ်ရုပ်ကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Miss Heritage International 2014 လှယဉ်ကျေး
ဇာတ်ကောင်နဲ့အပြင် တစ်ထပ်တည်းကျရဲ့လား ?
နှင်းသူဇာကာရိုက်တာကို သိပ်ထူးထူးခြားခြား သရုပ်ဆောင်တာတွေကို လုပ်စရာမလိုပါဘူး အပြင်ကကာရိုက်တာနဲ့လည်းကိုက်ပါတယ်။ ပညာရလောက်အောင် လုပ်ရတဲ့ အရမ်းကွာတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့အတွက် အရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ အခါမှာ Acting Coach နဲ့ သင်ကြားပေးတာကို ခံရပါတယ်။ အမတို့ပါဝင်တဲ့ အဓိက ဇာတ်ဆောင်သုံးယောက်ထဲမဟုတ်ဘဲ အခြားသူတွေပါပါဝင်ပါတယ်။ အမှတ်တရ အနေနဲ့ကတော့ တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ Acting Workshop ပေါ့နော် သူ့ရဲ့သီအိုရီ တွေ ကို နားထောင်တဲ့ အချိန် သူက အင်္ဂလိပ်လိုပြောပေမယ့် ပြင်သစ်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ နားထောင်ရတာလေးတွေ ကတစ်မျိုးဖြစ်တယ် ။ နားလည်တာလည်းရှိသလို နားမလည်တာလည်းရှိတယ်။ သူဘာလိုချင်မှန်းကိုလည်းမသိဘူး အဲ့လိုအခက်အခဲတွေ ရှိတယ် အမှတ်တရကတော့ အမတို့ Workshop တစ်လျောက်လုံး နေ့တိုင်းနီးပါးကိုငိုခဲ့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ နားလည်မှုလွဲတယ် သူကကျတော့ သူပြောတာကိုနားမလည်လို့ အားမလိုအားမရဖြစ်တယ်။ အမ တို့ကကျတော့ လုပ်နေရက်နဲ့အပြောခံရလို့ဆိုပြီး ငိုခဲ့ရတာမျိုးတွေ ရှိတာပေါ့နော်။
ကောင်းမှုတော်မှာရိုက်ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းရှိတယ် ။ ကောင်းမှုတော်မှာကျတော့ အဲ့အချိန်မှာကျတော့ တကယ့် အခက်အခဲကတော့ ဇတ်ဝင်ခန်းက အာရုံစိုက်ပြီး Mood အပြည့်နဲ့လုပ်ရမယ့် အခါမှာ ဘုရားပတ်ပတ်လည်မှာ နွေရာသီ ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘုရားပွဲတွေရှိတယ် ၊ ဇာတ်ပွဲတွေရှိတယ် အဲ့က အသံတွေ နဲ့ အလှုတွေဘုရားပွဲတွေ က သီချင်းသံ အကျယ်ကြီးတွေ ကြောင့် တကယ်ကို ဝမ်းနည်းပြီး ကောင်လေးနဲ့ခွဲရတော့မယ် ဆိုတဲ့ Mood ဖြစ်ရမယ့် အချိန်မှာ ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်က အသံတွေ က တကယ်ကို အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါလေးကတော့ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံကို မန္တလေး ၊ ပုဂံ ၊ တောင်ကြီး ၊ အင်းလေး နဲ့ ရန်ကုန် စတဲ့ မြို့တွေမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ရိုက်ကူးတဲ့ အချိန်ကတော့ နားလိုက်၊ ရိုက်လိုက် နဲ့အခက်အခဲတွေမျိုးစုံလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘတ်ချက် အခက်အခဲလည်း ရှိသလို နေရာအခက်အခဲလည်း ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ၆လလောက်တော့ ကြာခဲ့ပါတယ်။
လှယဉျကြေး ပွောပွတဲ့ မုဒွာရဲ့ချေါသံနဲ့သူမရဲ့အနုပညာအကွောငျး
မုဒွာရဲ့ချေါသံ ရုပျရှငျဇာတျကားမှာ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးအနနေဲ့ပါဝငျခဲ့တဲ့ လှယဉျကြေးရဲ့ အနုပညာလုပျငနျးစတငျခဲ့ပုံတှေ အပွငျ မုဒွာချေါသံ ဇာတျလမျးမှာ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ပါဝငျခဲ့တာတှေ ကို မေးမွနျးခဲ့ပါတယျ။
အနုပညာလောက ကို စဝငျတာကတော့
၂၀၀၃ခုနှဈမှာမျောဒယျစလုပျတော့ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျဖွဈခဲ့တာပါ။ ၁၀ တနျးဖွပွေီးပွီးခငျြးမှာ မျောဒယျ သငျတနျးကို စတတျခဲ့ပါတယျ။၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၀၉ အထိ မတငျမိုးလှငျရဲ့ မျောဒယျအဂေငျြစီ နဲ့ အတူတူတှဲပွီး လုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့မှာ ခဏနားပွီးတော့ ဒူဘိုငျးမှာ အလုပျလုပျဖွဈတယ။ျ ၂၀၁၁ လောကျမှာ Laurel Art ကြောငျးမှာ ပွနျတတျရငျးနဲ့ အနုပညာလောကထဲပွနျဝငျပွီး အခုထိလုပျဖွဈနတောပါ။ ၂၀၁၄ နှဈစမှာ မုဒွာကို ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၄ ဒီဇငျဘာလမှာ တော့ မလှနုထှနျးတို့နဲ့ခြိတျဆကျမိပွီးတော့ Miss Heritage International 2014 ကို နီပေါမှာ ကငျြးပတဲ့ အခါပွိုငျဖွဈတယျ။ အဲ့ဒီမှာ Winner ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
မောငျ့အိမျသူ မှာပါဝငျခဲ့တဲ့ လှယဉျကြေး
ရုပျရှငျသရုပျဆောငျပိုငျးကိုတော့ Laurel ကထုတျတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှနေဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကားတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျတယျ။ ရုပျရှငျကားကွီးအနနေဲ့ကတော့ မုဒွာရဲ့ချေါသံကို ရိုကျဖွဈတယျ ပွီးတော့ မောငျ့အိမျသူ အခု ဘာတဲ့လဲဟေ့ လာ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကား Laurel ကပဲထုတျတဲ့ ကားမှာပဲ ဧညျ့သညျသရုပျဆောငျအနနေဲ့ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
မုဒွာရဲ့ချေါသံထဲကနှငျးသူဇာကတော့ အနုပညာတက်ကသိုလျကြောငျးဆငျးအမြိုးသမီး တဈယောကျ ၊ ခရီးသှားကုမ်ပဏီထောငျထားတယျ ရိုးရိုးယဉျယဉျမွနျမာအမြိုးသမီးတဈယောကျ တိုငျးပွညျကိုခဈြတယျ ၊ လူမြိုးကိုခဈြတယျ ၊ ရိုးရာယဉျကြေးမှုတှကေိုခဈြမွတျနိုးတဲ့ အမြိုးသမီး တဈယောကျ ဇာတျရုပျကို တှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ။
Miss Heritage International 2014 လှယဉျကြေး
ဇာတျကောငျနဲ့အပွငျ တဈထပျတညျးကရြဲ့လား ?
နှငျးသူဇာကာရိုကျတာကို သိပျထူးထူးခွားခွား သရုပျဆောငျတာတှကေို လုပျစရာမလိုပါဘူး အပွငျကကာရိုကျတာနဲ့လညျးကိုကျပါတယျ။ ပညာရလောကျအောငျ လုပျရတဲ့ အရမျးကှာတဲ့ ကာရိုကျတာမြိုးတော့မဟုတျပါဘူး။
ဇာတျကားရိုကျဖို့အတှကျ အရှေးခယျြခံလိုကျရတဲ့ အခါမှာ Acting Coach နဲ့ သငျကွားပေးတာကို ခံရပါတယျ။ အမတို့ပါဝငျတဲ့ အဓိက ဇာတျဆောငျသုံးယောကျထဲမဟုတျဘဲ အခွားသူတှပေါပါဝငျပါတယျ။ အမှတျတရ အနနေဲ့ကတော့ တဈခါမှမလုပျဘူးတဲ့ Acting Workshop ပေါ့နျော သူ့ရဲ့သီအိုရီ တှေ ကို နားထောငျတဲ့ အခြိနျ သူက အင်ျဂလိပျလိုပွောပမေယျ့ ပွငျသဈလူမြိုးဖွဈတဲ့ အခါကတြော့ နားထောငျရတာလေးတှေ ကတဈမြိုးဖွဈတယျ ။ နားလညျတာလညျးရှိသလို နားမလညျတာလညျးရှိတယျ။ သူဘာလိုခငျြမှနျးကိုလညျးမသိဘူး အဲ့လိုအခကျအခဲတှေ ရှိတယျ အမှတျတရကတော့ အမတို့ Workshop တဈလြောကျလုံး နတေို့ငျးနီးပါးကိုငိုခဲ့ရပါတယျ။ အဓိကကတော့ နားလညျမှုလှဲတယျ သူကကတြော့ သူပွောတာကိုနားမလညျလို့ အားမလိုအားမရဖွဈတယျ။ အမ တို့ကကတြော့ လုပျနရေကျနဲ့အပွောခံရလို့ဆိုပွီး ငိုခဲ့ရတာမြိုးတှေ ရှိတာပေါ့နျော။
ကောငျးမှုတျောမှာရိုကျရတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးရှိတယျ ။ ကောငျးမှုတျောမှာကတြော့ အဲ့အခြိနျမှာကတြော့ တကယျ့ အခကျအခဲကတော့ ဇတျဝငျခနျးက အာရုံစိုကျပွီး Mood အပွညျ့နဲ့လုပျရမယျ့ အခါမှာ ဘုရားပတျပတျလညျမှာ နှရောသီ ဖွဈဖွဈတဲ့ အတှကျ ဘုရားပှဲတှရှေိတယျ ၊ ဇာတျပှဲတှရှေိတယျ အဲ့က အသံတှေ နဲ့ အလှုတှဘေုရားပှဲတှေ က သီခငျြးသံ အကယျြကွီးတှေ ကွောငျ့ တကယျကို ဝမျးနညျးပွီး ကောငျလေးနဲ့ခှဲရတော့မယျ ဆိုတဲ့ Mood ဖွဈရမယျ့ အခြိနျမှာ ဒီလိုပတျဝနျးကငျြက အသံတှေ က တကယျကို အခကျခဲဖွဈနတေယျ။ ဒါလေးကတော့ မှတျမှတျရရပါပဲ။
မုဒွာရဲ့ချေါသံကို မန်တလေး ၊ ပုဂံ ၊ တောငျကွီး ၊ အငျးလေး နဲ့ ရနျကုနျ စတဲ့ မွို့တှမှော ရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ ရိုကျကူးတဲ့ အခြိနျကတော့ နားလိုကျ၊ ရိုကျလိုကျ နဲ့အခကျအခဲတှမြေိုးစုံလညျးရှိခဲ့ပါတယျ။ ဘတျခကျြ အခကျအခဲလညျး ရှိသလို နရောအခကျအခဲလညျး ရှိခဲ့တဲ့အတှကျ ၆လလောကျတော့ ကွာခဲ့ပါတယျ။